My:NeMo-Boot2Gecko - MozillaWiki
B2G ဟာဘာတွေကိုများ အသစ်ထပ်မံသယ်ဆောင်လာပါသလဲ၊ကျနော်တို့က B2G ဟာ open Web ရဲ့ အခြေ ခံစံနှုန်းတွေ နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Mobile devices တွေလို့သိထားပါတယ်။ခင်ဗျားဒီထက်ပိုပြီး ထပ်ရှင်းပြေပေးပါအုံး?
B2G ဟာ ပြီးပြည့်စုံပြီး သီးသန့်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ open Web အတွက် အော်ပရေးရှင်း စစ်စတန်တခုပါ။B2G ဟာ မော်ဇီလာ နဲ့ မီးမြေခွေးတို့ရဲ့ နုလုံးသားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။သူက သေးငယ်တယ်၊ပေါ့ပါးတယ် ပြီးတော့ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေနဲ့ သင့်လျော်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ open Web လည်းဖြစ်တယ်။
B2G က Web အခြေပြုဖုန်းတလုံးလို့ ခင်ဗျားဆိုထားရင်၊ဖုန်းတလုံးရဲ့ အဓိက ကြတဲ့ အချက်တွေကကော။?
B2G မှာသုံးထားတဲ့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အားလုံးဟာ ကိုပဲ အသုံးပြုထားတယ်။ ပုံမှန် အသုံးပြုနေကြ ဖုန်းခေါ်တာ မျိုးတွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်တယ် HTML5 အခြေပြု UI နဲ့ပေါ့။
Android ဆိုတာဟာလည်း Open Source တခုပဲလေ၊ဘာကြောင့် Android ပေါ်မှာ တိုးမြှင့်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ စိတ်ကူးမရှိပဲ အသစ်တခုကို စတင်ရတာလဲ။?
တချို့ Android source code တွေကရရှိနိုင်တာတော့မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ Android က google ရဲ့ နည်းပညာတွေပဲလေ။ Android ရဲ့ roadmap (အနာဂတ်လမ်းစဉ်) ကလည်း google ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ B2G ကတော့ ထုတ်လုပ်မှုကလည်း open ဖြစ်ပြီး source code တွေကိုလည်း GitHub မှာရနိုင်တာကြောင့် အားလုံး ဂိုင်း၀န်းပါ၀င်နိုင်တယ်လေ။
ဘာကြောင့် Qualcomm အခြေပြု ဖုန်းထုတ်ကုန်တွေကိုရွေးချယ်လိုက်တာလည်း။ဘာလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ​စျေးနှုန်းသက်သာမှုတွေရှိလို့လဲ။?
Qualcomm က မော်ဇီလာ နဲ့ ပါတာနာ အဖြစ် ပထမဆုံး စက်တွေကို စတင်ဖြန့်ဖြူးမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ Sillicon တွေကို ပရောဂျက် ကြီးထွားလာတဲ့ အ​လျောက်တိုးမြင့်သွားမှာပါ။Qualcomm ကယခုလက်ရှိမှာတော့ Android-based smartphones တွေအတွက် chipset ( စက်တွေရဲ့ အဓိက DNA) တွေကို ဖြန့်ဖြူးသွားမှာပါ။ အတွေ့အကြုံရှိ ပြီးသား Qualcomm နဲ့ လက်တွဲလုပ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပိုမို လျင်မြန်ပြီး အကျိုးထိရောက်စေမှာပါ။
Retrieved from "https://wiki.mozilla.org/index.php?title=My:NeMo-Boot2Gecko&oldid=457228"
This page was last modified on2August 2012, at 00:57.